Inona no tokony hataon'ny mpizaha tany any Genève?
Geneva dia tanàna mahafinaritra sy mahafinaritra izay ahafahanao mahita zava-baovao sy mahaliana isan'andro. Ahoana anefa raha ianao no tao amin'io tanàna mahafinaritra io sy ny fotoana voafetra amin'ny fotoana? Ao Geneva, hisy hatrany ny toerana handehanana, na firy ny fotoana laninao hanapahana izany. Saingy raha mandamina tsara ny fandaharan'asa ianao, dia afaka mahazo fahitana lehibe sy fahalalana momba ny tanàna mandritra ny 1 andro. Mampahatsiahy ny soso-kevitrao izahay fa mendrika ny hijery sy handefa mpizahatany any Geneva indray andro any, mba hahazoana ny hatsaran-tarehiny sy ny rivotry ny hafanana.
Ny Top 10 zavatra tokony hatao any Genève
Mandehana mamakivaky ny afovoan-tanàna ary jereo ny toetrany manan-tantara, izay hita fa tena sarotra: ny Katedraly St. Petra , Bourg-de-Four Square , ny Rindrin'ny Fanavaozana sy ny Trano Opera Lehibe .
Mandehana eo amin'ny tetezana malaza Mont Blanc, izay natsipy ny renirano Rhone. Nomena ny tetezana izy io ho fanomezam-boninahitra ny tampon'ny tendrombohitra Mont Blanc, izay avo indrindra any Eoropa. Amin'io toerana io dia afaka mankafy azy ianao sy ny fomba fijery mahafinaritra ao an-tanàna, ary ny loharano mahafinaritra an'i ŽédÎ - ny faharoa avo indrindra manerana izao tontolo izao (140 m).
Misafidiana tranom - bakoka izay mifanaraka amin'ny tombontsoanao: Museum Ariana, Museum Natural History, Museum Clock, Museum Barbier-Muller, Museum Puppet, Museum of Art and History , Museum Museum .
Nalaina sary an-tsaina ny sary sokitra "Lozam-pifamoivoizana", vita amin'ny hazo ary ny fidirana ao amin'ny foiben'ny Firenena Mikambana ao amin'ny Palais des Nations .
Jereo ny fijerinao. Ao amin'ny valan-tserasera Anglisy dia misy famantaranandro mivantana, izay misy loko 6000 ary manana ny lanjany lehibe indrindra manerantany (2.5 m) ary 5 metatra. Fantatr'izy ireo ihany koa fa ny fitaovana misy hetsika hijery watch Swiss dia sady mampiseho ny fotoana marina.
Misotroa rano avy amin'ny iray amin'ireo loharanon'ny Genève, izay tena betsaka ao an-tanàna. Ary avy amin'izy ireo no tsy mandroso, fa ny tena mineraly rano.
Mankanesa amin'ny sambo eo amin'ny Farihin'i Leman ary mankasitraka ny fomba fijerin'ny bourgeoisan'ny tanàna sy ny tendrony Alpine tsara tarehy.
Mividiana fiambenana Swiss, raha manana teti-bola tsara ianao - ny vidiny ho azy ireo dia ambony. Ao Genève, ny foiben'ireo marika fijery malaza dia miorina, ary noho izany, fivarotana fiambenana maro, anisan'izany ny antitra sy ny asa tanana.
Andramo ny sakafo avy any an-toerana : raclette (hena miaraka amin'ny pikam-bary), rosti (voatabia amin'ny ovy, henam-boankazo sy atody) ary fondue (avy amin'ny karazan-tsaka hafa, ohatra, sôkôla). Araka ny fanadihadian'ny gourmets, ny orinasa tsara indrindra dia servisy iray amin'ny trano fisakafoanana any Genève - Café du Soleil (Place du Petit-Saconnex, 6).
Mba hividy ho fahatsiarovana ny divay Geneva, satria any ivelan'i Soisa ianao dia tsy mahavita manandrana azy - afa-tsy 1% amin'ny famokarana divay amin'ny firenena no entina.
Hiantsena any Lausanne
Kianjan'ny Towns of Tallinn
Museum History History
Sarintanin'ny fizahan-tany ao Madrid Card
Soy sauce miaraka amin'ny sakafo
Photoshoot tamin'ny fiandohan'ny lohataona
Antibiotika ho an'ireo ankizy manana kohaka sy mangatsiaka
Vest of fox fur - modely hood models hood and no
Inona avy ireo vitamina amin'ny radiasy?
Goose fat - fampiharana
Ahoana no hanamboarana ekirika?
Kabina fantsom-barimbazaha ho an'ny trano fandroana
Intimissimi bra tsy misy pips
Fotoam-pivoriana lohataona teny an-dalambe
Chiffon Knee-long Dress
Famakiana ny fluid amniotic - famantarana
Fotsy fotsy - famandrihana medikaly
Oh, tsy faly amin'ny fanambadiana aho
Ahoana no hanatsarana ny karma?
Ny fomba hifidianana puppy Shepherd alemà?